Art is My Life: ခြောက်ပုလင်းပြသနာ
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 2:22 PM
စားဝတ်နေရေး အဆင်မပြေ၊ ကြပ်တည်းရာကနေ လူတွေလည်း စိတ်ဓာတ်တွေ ပျက်ပြားကုန်ပြီ ထင်တယ်။ ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းနဲ့တော့ မဆိုင်လောက်ပါဘူး။
ဟားဟားး မခံရတော့လဲ .. ရီစရာလိုလိုပဲ..
ခံရတဲ့လူကြ စိတ်ပျက်စရာ ဖြစ်မှာပဲ.
အတွေ့အကြုံလေးတွေကို လက်ညောင်းခံပြီး မျှဝေတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် တူနယ်ဂျင်း.
စာရေးအေကာင်းတယ်။ မှတ်သားစရာလဲပါတယ်။ ထပ်ရေးပါသီး။
life is an experience. corruption is everywhere. do not expect much from people.